Ikhaya IZITOLO EZIZWELONKE ZOKWENZA IFOOTBALL Abadlali bebhola lebhola lesiNgisi U-Eric Dier Ubuntwana Bombhalo Plus I-Untold Biography Facts
I-LB inikeza iNdaba ephelele ye-Football Star eyaziwa kakhulu ngeSiteketiso; "I-Dier Wolf". I-Eric yethu Childer Story Story kanye ne-Untold Biography Facts ikulethela i-akhawunti egcwele yezenzakalo eziphawulekayo kusukela ngesikhathi sakhe sokuzalwa kuze kube manje. Ukuhlaziywa kuhilela indaba yakhe yokuphila ngaphambi kokudumisa, impilo yomndeni kanye ne-OFF kanye ne-ON-Pitch amaqiniso amancane awaziwa ngaye.
Yebo, wonke umuntu uyazi ngamakhono akhe kodwa abambalwa bacabangela u-Eric Dier Biography okuthakazelisayo kakhulu. Manje ngaphandle kokunye okulandelayo, vala uqale.
U-Eric Dier Ubuntwana Bombhalo Plus I-Untold Biography Facts -Isiqalo sokuphila
U-Eric Jeremy Edgar Dier wazalwa ngosuku lwe-15th kaJanuwari 1994 e-Cheltenham, eGoucestershire, e-United Kingdom nguLouise Dier (umama) noJeremy Dier (ubaba). (Bobabili abacebile)
Abazali baka-Eric basuka eSussex, eNgilandi baya eNhlonhlweni yase-Iberia ePortugal lapho u-Eric encane eneminyaka engu-7 ubudala. Ukufuduka kwavela ngenxa yomsebenzi kayise njengesikhulu esiphezulu kwe-tennis yebhizinisi lokukhiqiza imidlalo yeDunlop.
Lokhu kwenzeka ngesikhathi lapho unina enikezwa umsebenzi wokuphatha zonke izinhlelo zokungenisa izihambi e-UEFA Euro 2004 eyayiqhutshwa ePortugal.
Okufanelekile, kubalulekile ukusho ukuthi u-Eric wakhulela ePortugal nabazali bakhe nabafowabo abahlanu. UDier wachitha iminyaka ehlala esifundeni sase-Algarve ngaphambi kokuthuthela eLisbon. Ku-2010, abazali bakhe babuyela eNgilandi ngesikhathi ehlala ePortugal ehlala esikoleni se-Sporting CP.
U-Eric Dier Ingane Yabantwana Ingane Plus Untold Biography Facts -Umsebenzi wokufingqa
Ngesikhathi edlala ibhola e-International Preparatory School eLisbon, ikhono likaDier lokudlala ibhola libonakala nguthisha wakhe we-PE uMiguel Silva, owamtshela abeScott's scouts eneminyaka eyisishiyagalombili ubudala.
I-Dier isayine imigomo yobuchwepheshe ngezemidlalo ngo-Ephreli 2010. Iqembu lePutukezi lalinenhlanhla ngokwanele yokushaya okuthandwa yi-Arsenal, eManchester United naseTottenham Hotspur esayinini sakhe.
U-Eric Dier wafika enkundleni yezemidlalo e-Sporting CP lapho enza khona indawo.
Ngemuva kwalokho, wahlawuliswa ku-Everton ngoJanuwari 2011. I-website esemthethweni yezemidlalo ye-Sport yathi i-loan "Ithuba lokuba i-Dier encane ikhule emzimbeni onokuncintisana futhi ocebile".
Ekuqaleni, u-Dier wabhekana nobunzima bokubuyisela impilo yesiNgisi, kodwa ehlobo lika-2011, wendlulisela isikweletu sakhe esikoleni sase-Everton ngezinyanga ezengeziwe ze-12. U-Dier wamemezela u-Everton U18 izikhathi eziyishumi ngesikhathi sokukhwabanisa kwakhe imali futhi wanqoba i-2010-11 U18 Premier League nethimba. Lokhu kwaholela ku-Sporting ukumbiza.
Wenza ama-debuts akhe amakhulu e-Sporting CP e-2012 ngemuva kokubuya esikhwameni sakhe e-Everton. Ku-2014, wathuthela eTottenham Hotspur ngenkontileka yeminyaka emihlanu yemali eyi-£ 4 million.
U-Eric Dier Ingane Yabantwana Ingane Plus Untold Biography Facts -Ukuphila Komndeni
U-Eric Dier uvela emlandweni wezemidlalo ocebile. Ezemidlalo noma ukuzibandakanya ngqo kwezemidlalo kugijima kakhulu eMzimbeni wegazi.
UTABA: Uyise ka-Eric Dier uJeremy, ungumdlali we-tennis owayengumqeqeshi kamuva owagxila ebhizinisini lezemidlalo.
I-Dier Snr, othanda kakhulu ukuhlala ngemuva, wayazi inqubo yesikhathi eside edingekayo ukudala i-elite tennis professional. Ngakho-ke lapho indodana yakhe iqala ukubonisa ukuthi ingenzeka ngempela yabe igxila ekuqinisekiseni ukuthi u-Eric uzobe egcizelele kuphela lapho ekulungele ngokwengqondo nangokwenyama. Yilokho okwenzekile endodaneni yakhe.
UMAMA: Njengoba kushiwo ngaphambili, Umama ka-Eric; ULouise Dier uyisikhulu sase-European UEFA se-hospitality unit.
Umama ka-Eric Dier- Louise Dier
UMKHULU: U-Dier ungumzukulu kaTed Croker, owayenguNobhala weThe Football Association (FA) nomengameli waseCheltenham Town, nomshana kaPeter Croker, bobabili abadlala kahle ngoCharlton Athletic.
Umkhulu ka-Eric Dier- uTed Croker
U-Eric Dier Ingane Yabantwana Ingane Plus Untold Biography Facts -Ukuphila Ubudlelwano
I-Spurs ace, i-23, ibonwe nge-stunner ye-blonde ngemuva kokuya ku-David Yarrow ngasese ekubukeni ngasese e-Maddox Gallery eWestbourne Grove.
Lo mbhangqwana bobabili babegqoke kusukela emakhanda kuya emanzini ngemuva kokuya emhlanganweni owodwa, ngaseMayfair. U-Dier noHansen baye baba ndawonye iminyaka eminingi.
Lo mbhangqwana ube ndawonye ndawonye okwesikhashana manje futhi baqale babonwa ndawonye ngesikhathi seMidlalo yaseYurophu e-2016.
Abanye abalandeli baseNgilandi bazophikisa iholidi labo ngaphambi kokudutshulwa okudumile kwe-16 yase-Iceland e-Nice, kodwa abadlali abathathu baseTtandham baseNgilandi bebezisebenzisa kakhulu ikhefu labo elifushane ngaphambi kokuba babuyele ekuqeqesheni.
Harry Kane, Susa Alli no-Eric Dier babukeka beqabulekile ekudleni kwabo kokugcina njengoba behlangana neholidini, naphezu kokuphela kokuphela kwesikhathi.
U-Eric Dier uhamba noHarry Kane no-Dele Alli
Lezi zinkanyezi ezintathu ezincane ze-Spurs zivele zihlangene futhi zikhululekile njengoba zidle nabalingani babo endaweni engafanele yesikhathi ebusuku, amasonto amathathu emva kokuphuma kwabo kwe-Euro 2016 ehlazekayo.
U-Eric Dier Ingane Yabantwana Ingane Plus Untold Biography Facts -Ukuhlangana noBeckham
U-Eric Dier wachitha amahora amaningi ekhishwa ngokukhululeka kusukela esemncane eveza isithombe sakhe uDavid Beckham. akusikho u-fluke u-smash hit. Bekuyi David Bercham owamqeqeshela ukuthi angathatha kanjani ukukhahlela mahhala. Ukuhlangana kwakhe noDavid kuqala kwafika kwi-2004 Euro. Siyabonga ngokuxhumana kwebhola lomama wakhe.
Umsebenzi we-Eric Dyer ku-Sporting CP uthuthuke ngokushesha ngoba ubengcono kakhulu ekuthatheleni ukukhishwa kwamahhala.
I-Dier yaziwa njengento engumchwepheshe wokukhahlela mahhala eqenjini likazwelonke lesiNgisi.
U-Eric Dier Ubuntwana Indaba - Ukuchitha isikhathi nge David Beckham
U-Eric Dier Ingane Yabantwana Ingane Plus Untold Biography Facts -Imfihlakalo yaseManchester United
I-Dier ishesha ukushayela zonke izimangalo ngemuva kokuthi iwindi le-2017 lokudlulisa ihlobo likhishwe, lithi: "Ngicabanga ukuthi kungcono uma abadlali bebhola bekhathazeka ngokudlala ibhola. Ngithatha ifilosofi ukuthi uma ngikhathazeka ngebhola futhi ngingaya kwenye iklabhu, konke okunye kuzozinakekela. "
I-Poch ukhumbula ukuthi uthukuthele kanjani lapho ebona umdlali wakhe noMourinho bexoxa ngesikhathi se-2016 / 2017 ngemuva kokunqotshwa kwe-Spur's 1-0 e-Old Trafford.
Wembulela uJehova I-Daily Mail: "Ngithole ukuthi u-United wagcina enza izindlela futhi washiya uDyer kakhulu ekuphelelweni kwemicabango yokuya e-United."
I-Pochettino futhi uDier wachitha amahora amane evula umoya ngosuku olulandelayo.
I-Poch kanye noDier on izinkulumo zokudlulisa ama-Showdown
U-Eric Dier Ingane Yabantwana Ingane Plus Untold Biography Facts -Isizathu ngemuva kwesidlaliso
I-Dier Wolf- Lokhu akusilo umcabango wangempela njengoba kukhishwe nge-Twitter.
Uma ubuke ubukele i-Game of Thrones bese uqonda uhlobo olubi, lokuncintisana nolwethembekile lwempisi ejulile.
Lezi zimfanelo zenza isidlaliso esiphelele somdlali wethu omncane ovikelayo ozingela abaphikisana nobudlova obunonya.
U-Eric Dier Ingane Yabantwana Ingane Plus Untold Biography Facts -Amandla
Emile i-6ft 2in ubude, i-Dier eyakhiwe kahle inezimfanelo zokuba umvikeli ophakathi nendawo. Ukuqina okubonakalayo, i-tackler enobudlova nejubane elikhulu kwenza umphikisi onamandla.
Kanye nezimfanelo zakhe ezibonakalayo ezibonakalayo, imfundo yebhola ePortugal inikeze uDier ngekhono elizwakalayo, aze amvumele ukuba enze indima ebambe iqhaza. Omunye umnsalo wesigqoko sakhe kulandela ukukhishwa kwakhe okukhululekile, njengoba kuboniswa isiteleka esingenakulibaleka ngokumelene noBenfica eLisbon derby phakathi nezinsuku zeB-team.
U-Eric Dier Ingane Yabantwana Ingane Plus Untold Biography Facts -Isitayela se-Play
I-Dier ngumdlali ohambisana nezimo ezihlukahlukene, ongadlala njengomdlali, ephakathi-futhi eqinisweni- emuva. Kuye kwaphawula ukuthi ukusebenzisana kwakhe kwenza ukuba iTottenham yamukele ngokuphumelelayo indlela yokuzivumelanisa nezimo, evumela ukuba bashintshe uhlelo ngokuphumelelayo ngaphakathi komdlalo owodwa.
Unesisindo esifanele, isihloko esihle nesimo esihle sengqondo. U-Dier uthe uthelekele isitayela sePutukezi nesiNgisi. Olunye uhlamvu olubhekene nomnsalo wakhe lokuthatha ukukhishwa okukhululekile.
Izithombe zikaDier Roy Roy kanye noRafael Márquez, abaphefumulele isitayela sakhe sokudlala.